Droneport ga-enye gị ohere ijikwa ụgbọ elu nke quadrocopters nke dịpụrụ adịpụ - Akwụkwọ akụkọ "Potato System"
Ndị ọkachamara Steppe AgroHolding ebidola ịnwale ọdụ ụgbọ mmiri drone, ọdụ kwụụrụ onwe maka ịkwado drones ọrụ ugbo na-eje ozi ala ubi, ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-akọ. Ngwaọrụ ahụ na-enye gị ohere ijikwa ụgbọ elu nke quadrocopters n'ebe dị anya, site na ebe ọ bụla n'ụwa nwere ohere ịntanetị, na-enweghị ndị na-anya ụgbọ elu na-ahapụ maka otu mpaghara.
A na-eji Quadcopters eme ihe n'ọtụtụ ebe na usoro teknụzụ: site n'enyemaka ha, ha na-emeso ubi na ngwaahịa nchebe ihe ọkụkụ, na-enyocha ọnọdụ ihe ọkụkụ, na-achịkwa usoro teknụzụ, na-eduzi foto ikuku nke ubi. Ugbu a, ndị na-anya ụgbọ elu na-achịkwa drones site na ala, ma na ntinye nke ọdụ ụgbọ mmiri drone, usoro a ga-akpaghị aka na etiti.
Ọrụ ụgbọ elu na-abịarute n'elu ikpo okwu droneport site na ebe njikwa ozi, mgbe nke ahụ gasịrị, quadrocopter na-apụ onwe ya, rụchaa ọrụ ahụ ma laghachi na ọdụ ntọala maka chaja akpaka. N'oge a, a na-ebufe foto na ihe vidiyo niile enwetara site na ọdụ ụgbọ mmiri na sava nhazi data. Enwere ike iji ọdụ ụgbọ mmiri mee ihe n'afọ niile: a na-emechi ya ma na-echekwa okpomọkụ achọrọ.
Mmepe nke ọdụ ụgbọ mmiri bụ ọrụ nke ụlọ ọrụ Russia Aeromax maka Agroholding STEP. Aeromax na-arụkwa ọrụ n'ịmepụta ụgbọ ala ugbo ala.
isi: Weebụsaịtị gọọmentị nke njikwa ọrụ ugbo "STEP"
Tags: ugbo dronesọdụ ụgbọ mmiridigitalization nke ugbo
"Ọgọstụ" ewepụtala nkwadebe yana ihe ndị na-arụ ọrụ nke mmepụta ya
Enwere ike iji ntụ ntụ nduku kpọrọ nkụ dị ka nri anụmanụ